Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko - Kusuka kuLinux | Kusuka ku-Linux (Ikhasi 2)
Namuhla, sizophinda sinikezele ngokungena kwezokungcebeleka nokuzijabulisa ku-GNU / Linux, ikakhulukazi enkundleni ...
AmaLinuxeros amaningi avivinya njalo i-GNU / Linux Distros ehlukile. Abanye njengami, imvamisa sizama izindawo ezahlukahlukene ku-GNU / Linux Distro efanayo ...
Namuhla sizokhuluma ngohlelo lwesimanje nolusizo olubizwa nge- «Ksnip». Okuthi, kungenye yezinhlelo zokusebenza eziningi, inhloso yayo ...
Namuhla sizobuye sikhulume ngensimu yeDeFi futhi, kepha hhayi ngamaWallets, noma ngeDigital Mining Software ...
Namuhla, sizophinde singene embusweni weDeFi World. Futhi ngenxa yalesi sizathu, sizokhuluma nge-2 ...
Namuhla sizokhuluma ngendaba yemiqondo ye- "Firmware" ne "Driver", ngoba iyimiqondo emi-2 ebalulekile ngoba ...
Kungaba ngezizathu zobuchwepheshe (ucwaningo noma ukulungisa) noma ngezizathu zokufuna ukwazi nokwenza ngezifiso (Izinsuku Zamadeski), ze ...
Uma ufuna ukuqala ngesayensi yedatha, ngokuqinisekile uzothanda ukwazi ukuthi ungayifaka kanjani i-Anaconda ku-VPS yakho
Ukuqhubeka nezincwadi zethu ngesihloko sokugenca, namhlanje sizobhekana nephuzu lokuthi "Amathuluzi wokugenca" ngemininingwane ethe xaxa….
I-BTColor: Isikripthi esincane sokuhlobisa i-GNU / Linux Terminal
Namuhla futhi, njengezikhathi ezithile, sizokwethula ithuluzi elincane noma uhlelo lokusebenza, oluwusizo kubo bonke labo abathanda ...
Namuhla, abantu abaningi bahlala bexhumana namakhompyutha, kungaba ngomsebenzi, ukuzijabulisa, noma nje ukuphumula. Futhi ngenkathi lokho kwenzeka, ngo ...
I-Asterisk: Ungayifaka kanjani i-IP Telephony Software
Uma ucabanga ukufaka isoftware ye-Asterisk IP telephony, nazi zonke izidingo nezinyathelo zokufakwa kwayo
Uma une-Oneplus 2 ofuna ukuyinika impilo entsha ngeLinux, ungalandela lezi zinyathelo ukufaka Ubuntu Touch
Njengoba sesivele sazi, amaLinuxeros amaningi noma wonke anolwazi, ama-GNU / Linux Operating Systems ethu ngokuvamile anezinhlobonhlobo eziningi zento ngayinye ...
Kulokhu okuthunyelwe namuhla, sizokhuluma futhi sengeze omunye umdlalo omnandi kusukela ngonyaka odlule kuhlu lwethu oluhle nolukhulayo lwe ...
Impela usuvele uyazi amaphrojekthi amabili wokuphathwa kweziqukathi. Kepha ... ngubani onqobayo empini iDocker vs Kubernetes
Namuhla, sizophinde singene emhlabeni wokuthuthuka kwesoftware (izinhlelo zokusebenza) kanye ...
Kungakhathalekile ukuthi iyiphi i-Operating System esiyisebenzisayo, sonke kwesinye isikhathi besikade sidinga noma sidinga ukwenza iDVD ebukeka kahle, ...
I-gPodder: Isihlanganisi semidiya esilula neklayenti le-podcast le-Linux
Kusukela, kulezi zinsuku ukusetshenziswa kwamaPodcast kuyimfashini kakhulu, hhayi emkhakheni we ...
Namuhla, sizoqhubeka nesicelo esisodwa semilayezo esheshayo esaziwa kancane emkhakheni we-Linux, obizwa nge- "Adamant". Ngokuyinhloko, i- "Adamant" ngu ...
Ukuqala ngenyanga kaFebhuwari sizoqala ngohlelo lokusebenza olungaphawulwanga ngesikhathi ku-Blog yethu. Ikona ...
Umhleli: Isicelo sokulandela imisebenzi, amaphrojekthi nezinhloso
Namuhla sizohlola olunye uhlelo lokusebenza emkhakheni wokukhiqiza komsebenzisi, okungukuthi, lawo avame ukuba nenkani, ...
Umkhuba wokusetshenziswa kokuqukethwe ngefomethi yokusakaza minyaka yonke uya ngokuya wanda, futhi manje nge ...
NgoMsombuluko odlule sikhulume ngePywall, uhlelo lokusebenza esilusebenzisayo ukwenza iphalethi yombala kusuka ku ...
Ngenkathi abasebenzisi abaningi, noma kungenxa yokuthanda izinto zomuntu siqu noma izidingo zomsebenzi, bavame ukuthanda amathuluzi wesoftware agcwele ...
Njengenjwayelo, ngezikhathi ezithile, imvamisa sethula ithuluzi, uhlelo lokusebenza, inqubo noma imininingwane ewusizo, yabo bonke ...
Komorebi: Ungawenza kanjani ngokwezifiso amadeski ethu anezizinda ezi-animated?
Ukuqhubeka nezindatshana zethu zokwenza ngokwezifiso, namuhla sizoletha uhlelo lokusebenza olukhulu futhi oluwusizo kakhulu lwe ...
Abanye abasebenzisi beLinux abanentshisekelo bavame ukugubha i- #DesktopDay yeqembu noma umphakathi wabo ngezinsuku ezithile, ikakhulukazi ngoLwesihlanu….
Njengoba kunikezwe ukuthi lo nyaka we-2020 ube unyaka lapho i-videoconferencing idume kakhulu ngenxa ye ...
I-LibreOffice Office Suite: Kokuncane kwakho konke ukuze ufunde kabanzi ngakho, ngezixhumanisi ezithile ezinhle namathiphu.
Kuphakathi kokuthi singabasebenzisi bohlobo oluthile lwe-Ubuntu, noma amanye ama-Distros akhishwe njenge-Mint noma ...
Kulolu shicilelo sizobona ukuthi silifaka kanjani i-Guix, ithuluzi elehlukile nelithakazelisayo noma uhlelo lokuphathwa kwamaphakheji. Njengoba sekuvele ...
Njengoba sesivele sazi kahle, sonke esivame ukusebenzisa ikhompyutha, isiphequluli seWebhu singaba ...
Njengoba sivele siveze kushicilelo olwedlule, i-GNU / Linux imvamisa iyisistimu yokusebenza efanelekayo yabo bobabili abasebenzisi abanolwazi futhi ...
I-CodeBlocks: I-IDE enqamulelayo ewusizo, ekhululekile futhi evulekile, elungele i-C ne-C ++
Kulo nyaka, ngokusho kweStack Overflow Developer Survey 2020, indawo yokuqala yeLinux isaqinisekiswa njenge ...
Kwabaningi bethu abanentshisekelo ngeLinux World, akudingeki nje kuphela ukuyisebenzisa, kepha kaningi si ...
Esinye sezihloko noma izindawo, ezivame ukuheha abasebenzisi abaningi be-GNU / Linux abaningi ngokwengeziwe ...
I-Virtualization njengomqondo wobuchwepheshe yisihloko esibanzi, kwesinye isikhathi esiba nzima ukusichaza, kepha, kusukela ...
Ngokuyinhloko, umsebenzisi wekhompyutha ovamile ufuna ukuba ne-Intanethi ngezinto ezi-2. Owokuqala, uzulazule futhi ngaleyo ndlela ukwazi ...
IGoodvibes: Uhlelo oluhle kakhulu lokulalela umsindo ovela kwi-Intanethi
Impela, lapho umsebenzisi efuna ukusebenzisa (bheka / lalela) okuqukethwe kwe-multimedia online, noma ngabe banaluphi uhlobo lwe-Operating System, ...
Ngemuva kokuhlanganisa kabanzi isihloko sezindawo zedeskithophu (ama-DE), abaphathi bamawindi (ama-WM) nabaphathi ...
I-Audio Recorder: Isicelo esiwusizo sokuqopha umsindo futhi wenze ama-podcast
Ukuphequlula izinsuku ze-Inthanethi ezedlule, ngifuna i-Free Software ne-Open Source App engangivumela ukuba ngiqophe umsindo ...
Uma kukhulunywa ngamawebhusayithi ukufunda nokwazi izindaba zeSoftware ethile (Izinhlelo Zokusebenza, Izicelo Nezingxenyekazi) ...
I-Wallabag: Uhlelo lokusebenza lomthombo ovulekile lokuzibamba ukusindisa amawebhusayithi
Namuhla, sizokhuluma ngohlelo lokusebenza lomthombo ovulekile olugwema ukusetshenziswa kwezicelo zokuphathelene, ezivaliwe zokufunda kanye ...
Ungayivikela kanjani ifoni yakho engenantambo kubaduni
Noma ngabe ubhadane lakwaSARS-CoV-2 lukushukumisele ukuba ushayele ucingo usekhaya, noma uma ufuna nje ukuzizwa uvikelekile ...
I-GUI Manager ye-Modem: Uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu lokuphatha amamodemu we-USB
Izinhlelo Zokusebenza Ezimahhala nezivulekile, njenge-GNU / Linux, imvamisa zinezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu esingazazi kaningi ngokuhlukahluka ...
Kuma-Technologists athanda amaTelecommunications Networks kanye ne-GNU / Linux, kunezinhlelo ezinhle ezikhululekile nezingenazihibe, njenge-GNS3, ethi ...
Yize ukugenca kungeyona inkambu yekhompyutha, iPentesting ngokuphelele. Ukugenca noma ukuba ...
I-Webmail: izinketho onazo
Impela usuvele unayo i-akhawunti eyodwa noma amaningi we-imeyili, kepha mhlawumbe awuthokozi ngensizakalo noma uyi ...
I-WebM: Phatha ifomethi evulekile yomthombo wevidiyo ku-GNU / Linux
I-WebM, njenge-WebP, iyifomethi yomthombo ovulekile eyenziwe i-Google, kepha kulokhu amafayela ...
I-WebP: Phatha ifomethi yesithombe somthombo ovulekile ku-GNU / Linux
I-WebP ifomethi yomthombo ovulekile eyakhiwe i-Google eminyakeni eminingana edlule, ukuthuthukisa ukuphathwa ...
Kwezinye izikhathi, sibhale ngezinkinga ze-Digital Mining futhi zibe nentshisekelo enkulu ku ...
Akunandaba, uhlobo lwe-Operating System esilusebenzisayo ngisho nekhompyutha, ngoba akekho umuntu oyimfihlo, ohlala ...
Ama-plug Brain: Ama-plugins ukukhulisa umkhiqizo
Ngemuva kokuthunyelwe kwangaphambilini okungu-2 mayelana nesicelo seCerebro, esigxile ekwenzeni ngcono umkhiqizo womsebenzisi ku ...
Ngemuva kokuthunyelwe kwethu kwangaphambilini mayelana nenguqulo yakamuva ezinzile nezindlela ezingenzeka zokufaka okuthakazelisayo futhi ...
Kwesinye isikhathi sikhulume ngezicelo zokuthuthukisa ukukhiqizwa kwabasebenzisi kudeskithophu yamakhompyutha abo….
Isipele se-Borg: Uhlelo Oluhle Lokulawulwa Kwesipele
Wonke umsebenzisi, kungaba ovamile, othuthukile noma obuchwepheshe, kumele azame ukugcina ama-Operating Systems awo, engavuselelwa kuphela, kepha futhi evikelwe ...
Ukusetha kabusha: Ungayisetha kanjani kabusha iDistian / Ubuntu esekwe eDistros?
Ukusetha kabusha, ukusetha kabusha, ukubuyisela noma ukumane ubuyele esimeni sokuqala noma esizenzakalelayo se-GNU / Linux Distros yethu, kuvame ukwenziwa kokunye ...
I-Pkg2ukuthwebula: Ungawakha kanjani amafayela wethu we-AppImage?
Kuvamile, kubasebenzisi abaningi be-Operating Systems evulekile nevulekile, ikakhulukazi kwi-GNU / Linux, ngokuhlukahluka kwayo okuningi ...
Umdali we-QT: I-IDE enqamulelayo yesikhulumi sonjiniyela be-Qt.
OkweWindows, njengeMacOS noma i-GNU / Linux kunezindawo eziningi ezihlanganisiwe zoHlelo (Intuthuko Ehlanganisiwe Yezemvelo / i-IDE), etholakalayo ...
Kulezi zikhathi zamanje, ikakhulukazi phakathi nobhubhane lwe-COVID-19, lapho izinqubo zokufundisa nokufunda ...
I-Docker Hub: Ukufunda kancane ngobuchwepheshe be-Docker
Kanye namaRekhodi, namanye amasayithi afana neGitHub, phakathi kokunye ukuthuthukiswa okuku-inthanethi okufanayo namapulatifomu wokubamba, avumela ...
Sisanda kuthumela ngeFreedomBox, YunoHost nePlex. Namuhla ukuphenduka kohlelo noma uhlelo olufana ne ...
Ukubonakala kwe-Operating Systems kanye ne-Applications noma ama-Systems ngokuyisisekelo kuqukethe ukukwazi ukwabelana ngezinto eziningana ku-Hardware efanayo ...
ISuperTuxKart ngumdlalo wevidiyo odumile. Uma ufuna ukuvula wonke amathrekhi noma izikrini futhi ungalitholi ifayela lokumisa, lapha ngichaza ukuthi kanjani
IMegacubo isicelo sethu esilandelayo semultimedia esizobuyekezwa. Ngemuva kokuthumela mayelana nePopcorn neStremio, manje sekuyisikhathi sakhe ...
Emkhathini wezinhlelo zokusebenza ze-GNU / Linux kukhona izinketho ezahlukahlukene, maqondana namathuluzi wokuqopha noma abaphathi ...
I-App Outlet uhlelo oluthokozisayo olusivumela ukuthi sigxile endaweni ehlukile futhi ewusizo yeSitolo se-Inthanethi ...
Kwabasebenzisi Abathuthukile kanye neSysadmin kuhlale kuyintokozo futhi kuwumkhuba omuhle ukusebenzisa amaTheminali (amaConsoles) ...
Windows 10: Nika amandla iSamba ukuxhuma izinsiza ku-GNU / Linux
Njengoba sekuvele kunolwazi lomphakathi nolukhulu, iSamba yiphrojekthi yesoftware yamahhala evumela ukusetshenziswa kwe ...
Amapulatifomu e-Free, Free and Open LMS: Izici Nemisebenzi
Amapulatifomu e-LMS noma ama-Systems Learning Management Systems aku-inthanethi, anikela ngenye indlela esebenzayo nephumelelayo yokuqamba ...
Njengamanje, ukuphequlula kwi-Intanethi (Cloud / Web) kusekelwe ikakhulu kwi-Hypertext Transfer Protocol (HTTP), okusho ukuthi, i-HTTP ...
Labo bethu abangososayensi bamakhompyutha noma abathanda amakhompyutha ngothando olukhulu, bazi kahle ukuthi iyini i-USB ...
I-Timedatectl ne-Hwclock: Imiyalo yokusetha usuku nesikhathi ku-Linux
I-Timedatectl ne-Hwclock yimiyalo emi-2 ewusizo yokusetha isikhathi (usuku nesikhathi), kuma-Operating Systems wethu we-GNU / Linux. Abaningi…
I-AMPPS: I-Softaculous ye-Web Development Environment ku-GNU / Linux
Ukufaka izixazululo ze-web server (Webserver, ngesiNgisi) kunoma iyiphi ipulatifomu yesistimu yokusebenza (Windows, MacOS ne-GNU / Linux), kukhona ...
Njengoba sonke sazi, i-DEBIAN 10 Metadistribution ingenye yezindala kakhulu, eqinile futhi ezinzile kusethi ephelele ...
I-DOSBox: Ungazisebenzisa kanjani izilimi zokuhlela ze-DOS ku-GNU / Linux?
Labo bethu abasebenzisa i-Distros GNU / Linux njalo, imvamisa sisebenzisa i-terminal (console), kuyilapho kuphela abasebenzisi beWindows abenza….
I-XAMPP: Indawo elula yokufaka i-PHP yokuthuthuka ku-GNU / Linux
Njengoba sekuvele kwaziwa kwabaningi, i-XAMPP iyinhlangano ekhululekile nelula ukufaka i-Apache ngokuphelele…
Ngemuva kokuphequlula izinhlelo zokusebenza zegeyimu yevidiyo ye-GNU / Linux, efana neGameHub, Itch.io neLutris, kunengqondo ukungami ...
Njengoba sibonile ezincwadini ezi-2 zakamuva, enye ekhuluma ngeGameHub kanti enye ngeItch.io, ukunikezwa kwezixazululo (amaklayenti / amapulatifomu) emidlalo ...
Ukuqhubeka nengqikimba yeMidlalo, Izicelo kanye / noma Amapulatifomu wamageyimu wamavidiyo awusizo ku-GNU / Linux, ukuqinisa nokukhombisa ukuthi yethu ...
Ngaphandle kwalokho abaningi abangakucabanga, i-GNU / Linux Operating Systems njengamanje inokusekelwa okuhle kwe ...
Ezincwadini eziningi ze-Intanethi naku-DesdeLinux Blog bekucacile kithi, ubukhulu beziphakamiso, ezinye izindlela nokusetshenziswa ...
Elinye lamaphuzu abongwa kakhulu ngabathandi be-GNU / Linux Distros ububanzi obuningi bamathuba, ku ...
I-LXQT kungenye imvelo elula futhi esheshayo yedeskithophu, umfowabo we-LXDE. Futhi njengakamuva, akuvamile ...
I-LXDE: Iyini futhi ifakwa kanjani ku-DEBIAN 10 naku-MX-Linux 19?
I-LXDE iyindawo elula futhi esheshayo yedeskithophu, efana ne-XFCE neMATE. Mayelana ne-LXDE imvamisa akuningi kangako ...
I-MATE yindawo elula futhi ephelele yeDeskithophu, lapho futhi njengeCinnamon, esivame ukushicilela ...
Isinamoni: Iyini futhi ifaka kanjani ku-DEBIAN 10 naku-MX-Linux 19?
ICinnamon yindawo enhle futhi esebenzayo yeDeskithophu, esingashicileli ngayo kaningi, okokugcina kwethu ...
Ku-XFCE Desktop Environment ngezikhathi ezithile, siphinde siphawule ngezindaba zayo zakamuva (4.16, 4.14, 4.12, phakathi kwabanye), ...
I-KDE Plasma: Iyini futhi ifaka kanjani ku-DEBIAN 10 naku-MX-Linux 19?
Ngezikhathi ezithile sishicilela mayelana nezindaba zakamuva ze-KDE Plasma (5.17, 5.16, 5.15, 5.14, phakathi kwabanye), noma ngesihloko esithile esitelekisayo ...
I-GNOME: Iyini futhi ifakwa kanjani ku-DEBIAN 10 naku-MX-Linux 19?
Njengesijwayelekile, sihlala sikhuluma ngezindaba zakamuva ze-GNOME (3.36, 3,34, 3.32, 3.30, phakathi kwabanye), izandiso zayo noma ...
Iklayenti leSteam linezinkinga ezithile zokudlala imidlalo ethile kwiLinux ngamakhadi emidwebo kaNvidia. Lezi akuzona izinkinga ezinkulu kusukela ...
ILiquorix Kernel iyiKernel ekhethekile, yakhelwe ngendlela yokuthi isebenze njengokufaka esikhundleni esifanele ...
Lokhu kushicilelwa kungukuqhubeka (ingxenye yesithathu) yama-tutorials anikezelwe i-DEBIAN GNU / Linux Distro, inguqulo 10 (Buster), i…
Le ndatshana ingukuqhubeka (ingxenye yesibili) yezifundiswa ezinikezelwe ku-DEBIAN GNU / Linux Distro, inguqulo 10 (Buster), i…
Kulolu shicilelo sizoqhubeka nokunikeza inqubo ejwayelekile yokuvuselela nokwenza ngcono, kokubili ku-MX-Linux 19.0 naku-DEBIAN 10.2 ...
Ubuntu 18.x noma ngaphezulu: isixazululo uma inhlanganisela ye-Alt + Imp Pant + REISUB ingakusebenzeli
Usuyazi vele ukuthi yize Ubuntu buzinze ngokwedwala, abuhlali bungenangqondo ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi isicelo singa ...
Nazi izibonelo ezisebenzayo zomyalo we-egrep wokusebenza ku-GNU / Linux ngezinye izinkulumo ezijwayelekile futhi uthole ukuthi yini abangakwenzela yona
Amaseva weWebhu: Izinhlelo ezingcono kakhulu zamahhala nezivuliwe ezitholakalayo
Ukufeza ukuqaliswa kwamaSeva weWebhu, namuhla, kunezixazululo eziningi zamahhala eziphumelelayo nezixazululo zemithombo evulekile (izinhlelo) ezitholakalayo.
UNtopng: Umqapha womgwaqo wenethiwekhi yesizukulwane esisha omuhle kakhulu
INtopng iyi-tracker enhle kakhulu yenethiwekhi yesizukulwane esisha, okungukuthi, inguqulo elandelayo evuselelwe isizukulwane sohlelo lwangempela lwentop.
Kulesi sihloko sizokwenza ukubuyekeza okuningiliziwe kwePhaneli Yokulawula yamahhala yeWeb Hosting eyaziwa ngokuthi yiCWP (CentOS (Control) Web Panel).
Kumakhompyutha ethu anokuxhumeka okungenazintambo ne-GNU / Linux OS kuhlale kukuhle ukwazi ukuthi Ungayakha kanjani i-Hot Spot elula futhi esebenzayo (Hotspot)?
IDisroot: Njengamanje ingenye yezinketho ezimbalwa maqondana nezinkundla zamahhala, ezizimele neziphephile zamasevisi aku-inthanethi, kepha kuyindlela enhle kakhulu.
Uma uthanda idatha yezibalo kwiLinux nezinsizakusebenza ezithakazelisayo, ezinjengamashidi wokukopela, njll. Nalu ulwazi oluhle ...
Ungayishintsha kanjani i-UUID yokwahlukanisa ku-Linux
I-UUID (i-Universal Unique IDentifier) ​​iyisihlonzi esisetshenziselwa ukukhomba ukwahlukaniswa kohlelo lwefayela ku-Linux
Ukuguqula i-HTML ibe idokhumenti ye-PDF kulula ngezinhlelo zokusebenza ezinjenge-HTMLDOC. Ngizokukhombisa nokuthi ungayiguqula kanjani iwebhusayithi ibe yi-PDF
Yini i-VPN futhi ngingayikhetha kanjani engcono kakhulu yezidingo zami? Lolu udaba olubaluleke kakhulu namuhla, endaweni Yezokuphepha Kwemininingwane.
I-FFmpeg 4.2 "Ada": ukukhishwa okusha okunezici ezintsha ezibalulekile
I-ffmpeg 4.2 i-Ada ene-codenamed isiyakhishwa. Uhlobo olusha lwaleli suite lamathuluzi we-multimedia liletha izindaba ezibalulekile
dd: izibonelo zalo myalo oguquguqukayo
Umyalo we-dd ku-Linux waziwa kahle futhi uyasetshenziswa, kepha hhayi wonke umuntu owazi zonke izinto angakwenzela zona. Nazi izibonelo ezingokoqobo
Amabhange ezithombe aku-inthanethi ayindawo yokugcina impahla, isitolo sezincwadi, inqolobane yamaqoqo ezithombe, ngokuvamile.
Kusukela yadalwa, iSoftware ihlukaniswe ngokwemvelo ngezigaba ezi-3 okuyi: Systems, Programming ...
Izimvume ze-Linux zabaPhathi BeSistimu Nonjiniyela
Ama-DevOps lapho enza amaSystem awo awavamisi ukubheka ukuthi yiziphi izimvume ezifanele ukusetshenziswa. Futhi lapha sizokuqondisa kubo.
Hambisa amafayela amaningi anezakhiwo ezahlukahlukene ngasikhathi sinye kusukela ku-terminal
Sizokwethula indlela elula yokuthi ngasikhathi sinye uhambise kanjani amafayela ahlukile wemiyalo eminingi evela ku-GNU Linux
Umhlahlandlela Wokufaka we-Manjaro Linux 2019
IManjaro Linux njengamanje iyisabelo esithandwa kakhulu seLinux ngokusho kwamazinga weDistrowatch futhi yize ingenye…
Khubaza / nika amandla ukubika kwephutha okuzenzakalelayo ku-Ubuntu
Uma ufuna ukunika amandla isevisi yokubika yephutha le-Ubuntu Apport noma uma ufuna ukuyikhubaza, funda lesi sifundo esincane ngesinyathelo ngesinyathelo
Kulezi zinsuku, nsuku zonke, abantu abaningi ngokwengeziwe kumikhakha yomuntu siqu neyomsebenzi baqala noma baqala kabusha ukusebenzisa i-Free Software ne-GNU / Linux ngamandla.
Guqula i-Raspberry Pi yakho ibe yindawo yokungena engenantambo
Manje kulokhu sizobona ukuthi singayisebenzisa kanjani i-Raspberry Pi yethu njengendawo yokungena engenantambo.
Ungabafaka kanjani abashayeli abazimele beNvidia kuDebian 9 Stretch?
Lesi sifundo sizokukhombisa ukuthi uwafaka kanjani amashayeli wehluzo weNvidia ku-Debian 9 Stretch. Ngokuzenzakalelayo, uDebian usebenzisa umshayeli
Amathuluzi amabili amahle wokweqa i-NVIDIA ne-AMD GPU yakho ngaphansi kwe-Linux
Uma ungumdlali wamageyimu noma uthanda kakhulu futhi ucabanga ukweqisa ngokweqile i-NVIDIA noma i-AMD GPU yakho futhi usebenzisa iLinux, lokhu kungakuthakazelisa
Iyalela ukuthi inkumbulo yakho ibhekwe ku-Linux
Isifundo ngemiyalo yokuthi imemori yakho ilawulwe ku-Linux futhi ukwazi ukuyibheka ngendlela elula evela kukhonsoli
Ungazilondoloza kanjani izilungiselelo zedeskithophu ye-Mate?
Ukuze senze ukucushwa kwe-Mate yethu singakwenza ngosizo lwe-Dconf. Kuyindlela yedatha lapho ...
Ungasenza kanjani isipele esenziwa ngesandla se-XFCE ku-Linux?
Uma ufuna ukudala i-XFCE bakcup, kuzodingeka ucindezele futhi ulondoloze amafayela wedeskithophu abucayi ngaphakathi kwefolda etholakala ...
Ungakuthinta kanjani ukucushwa kwe-LXDE?
Ukuze senze le LXDE bakcup singakwenza ngokwakha ifayili elicindezelweyo lefolda eshiwo ukuze sikwazi ukugcina ...
Yini i-AUR nokuthi ungayinika kanjani amandla ku-Arch Linux nakwezisuswayo
I-AUR i-repo egcinwa ngumphakathi wabasebenzisi be-Arch Linux, lapha banikela ngamaphakeji wezinhlelo zokusebenza eziningi ...
Ungayisetha kanjani kabusha iphasiwedi yezimpande lapho uyikhohlwa
Uma ukhohlwe iphasiwedi eyimpande ekusatshalalisweni kwakho kwe-GNU / Linux, uzofuna ukufunda lesi sifundo ukuthola ukuthi ungayisetha kanjani kabusha.
Izibonelo ezilula nezisebenzayo zokubhala usebenzisa imiyalo eminingi
Izibonelo ezilula zemiyalo yomyalo ezosiza ukushicilelwa kwangaphambilini ngendaba yeShell Scripting.
Ungayibhala kanjani i-DNS traffic ku-Linux nge-DNSCrypt?
I-DNSCrypt yiphrothokholi yenethiwekhi eyenzelwe ukugunyaza ithrafikhi ye-DNS (Domain Name System) phakathi komsebenzisi wekhompyutha namagama ...
Yini i-Makefile futhi isebenza kanjani ngaphakathi kwe-Linux?
Insiza yokwenza idinga ifayili, i-makefile, echaza isethi yemisebenzi okufanele yenziwe. Leli gama lizozwakala kwabaningi kini ngoba ...
I-Sed: Ukufunda i-Shell Scripting Usebenzisa i-Sed Terminal Command
Umyalo "sed" uthathwa njengomhleli wombhalo osethelwe ku- "flow" esikhundleni se- "interactive" futhi uvumela ukuguqula okuqukethwe kolayini kufayela.
Njengamanje i-GNU / Linux Applications Ecosystem inohlu olubanzi futhi oluhle kakhulu lwezinhlelo Zokuthuthuka Kwesoftware.
Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka i-Deepin OS 15.6
Ngemuva kokwenza ukufakwa okulungile kwe-Deepin 15.6, kunamaphutha athile avele ngaphezu kweyodwa futhi awaxazulula.
Umhlahlandlela wokufaka we-Deepin OS 15.6
I-Deepin OS ngokungangabazeki ingenye yezabelo zeLinux ezinendawo enhle kakhulu yedeskithophu esingayibona kuLinux.
Ukugqwala wulimi lohlelo oluvulekile lomthombo olusekela ukusebenza okumsulwa, izinqubo, okubalulekile, nezinhlelo eziqondiswe entweni.
Ukuthuthukisa i-Operating System yethu ukwenza ngcono ukusebenza kwayo ngokwenza izinguquko ezithile kuyo.
Wonke umsebenzisi ku-GNU / Linux World amaphupho okwenza kahle i-Operating System yawo ngangokunokwenzeka kuyo. Futhi lapha sikunikeza lezo Zeluleko.
I-HomeBank uhlelo lokusebenza lokuphathwa kwezezimali olubhalwe ngolimi lwezinhlelo ze-C futhi isikhombimsebenzisi sayo sokuqhafaza sisebenzisa i-GTK +
Ungasenza kanjani iSondlo se-GNU / Linux usebenzisa iSkripthi?
Ukugcina ukusebenza nokunciphisa amaphutha nokwehluleka, kuhle ukugcina uhlelo lwethu lwe-GNU / Linux sisebenzisa iSkripthi.
Ungasenza kanjani isipele sedatha kuzinsizakusebenza usebenzisa i-Shell Scripting?
Kubalulekile ukuchitha isikhathi wenza izipele zemininingwane yethu, kungaba kumakhompyutha ethu noma ngaphandle ...
Ungaligcina kanjani futhi ulibuyisele ikhadi le-SD le-Raspberry Pi?
Ukugwema lolu hlobo lokuzisola singenza isipele sokuvikela ikhadi lethu le-SD futhi sikwazi ukusindisa lezo zinhlelo nokulungiswa
Njengamanje i-GNU / Linux Applications Ecosystem inohlu olubanzi futhi oluhle kakhulu lwezicelo ze-Multimedia Editing and Design.
I-Shell Scripting yokwakha ifayela le-.desktop lohlelo lokusebenza oluphathekayo
/ Ungasakha kanjani isixhumanisi esiqondile kwimenyu yokuqala nakwideskithophu yezinhlelo zokusebenza eziphathekayo, ezizisebenzisayo neziqukethe zona usebenzisa ifayili le-Shell scripting
I-PINN: enye indlela eya ku-NOOBS ye-Raspberry Pi yakho
I-PINN (i-PINN akuyona i-NOOBS) njengo-NOOBS isifaki sohlelo lokusebenza lwe-Raspberry Pi esivumela ukuthi sifake izinhlelo eziningi ku
I-Runescape neTibia: Faka futhi udlale namakhasimende endabuko we-GNU / Linux
I-RuneScape ngumdlalo wohlobo lweMMORPG futhi ihlukaniswe yaba yimibuso eminingana, izifunda namadolobha, futhi inamaseva amaningi aku-inthanethi.
Uma kungekho Distro Gamer evumelana nezidingo zakho noma izidingo zamaqembu akho, hlela i-Distro yakho ukuze usebenzise imidlalo yakho oyithandayo.
I-New Out Of Box Software eyaziwa kangcono njenge-NOOBS iyinsiza enhle esingayisebenzisa ku-Raspberry Pi yethu, leli thuluzi lisinika ithuba.
Izinqolobane ze-GNU / Linux Distribution: Ubuciko Bokubahlanganisa!
Indawo yokugcina iseva ngokuyisisekelo igcina izinhlelo ezithile zohlelo olulodwa noma eziningi ze-Linux Operating Systems, futhi ngokuvamile yakhelwe ukutholakala nge-console noma ngemenenja yephakeji yokuqhafaza, futhi lokho kusinika ithuba lokuthi izinhlelo ezitholakala kulezi izinqolobane ziqinisekisiwe.
Ungawafihla kanjani amafayela esithombeni nge-Cryptmount?
Yebo, kule ndatshana entsha sizobona ukuthi kungenzeka yini ukuthi sikwazi ukusingatha amafayela ngesithombe esibethelwe ngosizo lwale nsiza, ngoba lokhu sizosebenzisa amanye amathuluzi esivele sinawo ngaphakathi kweLinux.
Umhlahlandlela Wokufaka weVoyager Linux 18.04 GS LTS
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kukhishwe inguqulo entsha yeVoyager Linux GS engikutshele ngayo kule ndatshana, okwenza kube inketho enhle kakhulu kulabo abafuna uhlelo oluhle lokuqhuba imidlalo yabo. Kungakho ngabelana ngalo mhlahlandlela omncane wokufaka obhekiswe kubasebenzisi abasha.
Ungayifaka kanjani iService Messaging ngeGammu - Ingxenye 1
IGammu igama lephrojekthi lohlelo lokusebenza (umugqa womyalo wensiza) olungasetshenziswa ukulawula amadivayisi eselula kusuka kuLinux-based Free Operating System, yize ibuye ibe yipulatifomu. Kubhalwe ku-C futhi kwakhiwe ngaphezulu kwe-libGammu.
Ngalesi sikhathi sizogxila kumaphakeji ngefomethi ye-AppImage, abasebenzisi abaningi namanje abangazi ukuthi bangawafaka kanjani nokuthi bangawahlanganisa kanjani ohlelweni lwethu. I-AppImageLauncher uhlelo lokusebenza likuvumela ukuthi uqalise kalula amafayela we-AppImage, ngaphandle kokuthi uwenze asebenze.
Noma sinenketho yokukwenza ngaphandle kokufaka kabusha, kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukufaka kusuka ekuqaleni ngaphezu kokuthi bonke abasebenzisi abasha kumele bakwenze, yingakho sabelana nawe ngalesi siqondisi sokufaka esilula.
Isikhathi esithile manje Ubuntu usinikeze inketho ngesikhathi senqubo yokufaka ukubethela ifolda yethu yasekhaya, iningi lethu elimane liyishaye indiva. Le nketho isilinganiso sokuphepha ukuze abantu bangaphandle bakwazi ukufinyelela kufolda yethu yomuntu siqu.
I-Xubuntu ibhekwe njengokunambitheka kwe-Ubuntu okungadingi izinsiza eziningi kangaka zohlelo, ngakho-ke ihlukaniswe njengokwabiwa okulula, ngaphezu kwalokhu lokhu kusatshalaliswa kugcina ukusekelwa kwezinhlelo ezingama-32-bit ngokungafani no-Ubuntu.
Eminye imiyalo eyisisekelo yeGrep
Kulesi sigaba esincane ngizokwabelana nawe ukuthi i- "grep" isebenza kanjani esingasesha ngayo umbhalo noma iphethini ethile kufayela noma enkombeni ephelele. Ukusetshenziswa okuvame kakhulu ukusesha ngokushesha ifayela ngezenzeko zephethini.
Lokhu okuthunyelwe kusilethela indlela ebuyekeziwe yokufaka uhlelo lwe-Oracle's Java 10. IJava JDK imele iJava Development Kit (i-Oracle JDK) futhi iyiThuluzi Lokuthuthukisa elisemthethweni lolimi lohlelo lweJava, indawo yentuthuko egxile entweni.
Hhayi-ke, namhlanje ngikwethulela i-Akiee eyi-open source multiplatform task manager, u-Akiee ukhishwe ngaphansi kwelayisense le-GPL2 futhi nekhodi yalo iyatholakala kwi-GitHub. U-Akiee ukhuthazwe ngu-AGILE. Lolu hlelo olukhulu luzosisiza sigxile emisebenzini yethu.
Isikhala sememori esishintshanayo noma esishintshanayo noma esaziwa nangokuthi imemori ebonakalayo, yiso esisebenzisa isikhala esikwi-HDD esikhundleni semodyuli yememori. Ngaphandle kwalokho, izinhlelo zisebenzisa i-RAM nokutholakala kwayo ukusebenzisa.
Abaningi bethu uma kungenjalo iningi lethu lisetshenziselwe ukusebenzisa isikhombimsebenzisi sokuqhafaza noma imvelo yedeskithophu ukusho. Imisebenzi yokuhambisa, ukuhlela, ukuqamba kabusha phakathi kwezinye izinto amafayela noma amafolda avame ukwenziwa ngendlela elula ngokuchofoza nje okumbalwa.
Indlela elula yokwazi ukuthi ngabe ikhompyutha yakho isebenzisa i-UEFI noma i-BIOS yefa
Akungabazeki ukuthi i-UEFI idlula kude i-BIOS yefa, ngoba ukufika kwalokhu bekuzohlanganisa ukushiyeka okuningi kwe-BIOS yefa. I-UEFI noma i-Unified Extensible Firmware Interface yengeze ikhono lokusebenzisa amadiski amakhulu kune-2TB futhi ibe ne-CPU yokuzimela kanye nabalawuli abazimele.
Sikukhombisa lesi sifundo esisebenzisekayo sokucindezela nokucindezela amafayela kalula futhi ngokushesha ekusatshalalisweni kwethu kwe-GNU / Linux.
Iningi lokusatshalaliswa kwanamuhla kwe-GNU / Linux kunokusekelwa okuhle ngehardware yakamuva, ngaphandle ...
Ukuthi i-Intanethi iyinto ebalulekile ekusetshenzisweni kwempucuko yabantu kusobala, kepha kuye ...
Sanibonani nonke 🙂 Ngaphambi kokuqhubeka nemibhalo yohlu lwama-oda, ngifuna ukugubha ukwethulwa kwe-git ...
ukuqinisa ukusebenzisana nokuvikelwa kwemishini nezinhlelo, kulesi sici, sikhuluma ngokuthi uwavikela kanjani amakhompyutha ethu kubahlaseli abangaba khona.
Shintsha i-Odoo ibe yisoftware enamandla yezikhungo zemfundo
Kujwayelekile ngalezi zikhathi ukuthi izikhungo zemfundo zidinga amathuluzi aphatha ukubalwa kwezimali, ezabasebenzi, ezokuphatha kanye ...
Ukubheka ukusebenzisa ubungozi
Njengoba bengifuna ukuqhubeka ngizama ngalesi sihloko, ake ngikutshele umlando omncane, umbono kanye nokwenza ...
Ungaphendula kanjani kubaduni 'abangochwepheshe'
Abaduni abadingi amaseva amakhulu kuphela, kepha futhi nabancane nabaphakathi, ngisho nabantu abathile, kubalulekile ukwazi ukuthi ungakuphendula kanjani kulokhu.